जिफन्ट कतारको सांस्कृतिक कार्यक्रम र केहि प्रश्न हरु - Ek Jamarko
Home / विचार / जिफन्ट कतारको सांस्कृतिक कार्यक्रम र केहि प्रश्न हरु
जिफन्ट कतारको सांस्कृतिक कार्यक्रम र केहि प्रश्न हरु
५ जनवरी २०१८ को दिन आइएलओ गवर्नर, साथै एमाले पोलिटब्युरो सदस्य डा•बिन्दा पान्डेको उपस्थितिमा दोहा स्थित जिफन्ट सपोर्ट ग्रुप कतारले नया वर्षको सांस्कृतिक धमाका प्रस्तुत गर्यो। कार्यक्रम भव्य भयो र मनोरन्जनात्मक रुपमा सफल पनि भयो भनेर हल्ला चलाइयो।
अहिले एउटा सापेक्षित बहसको सुरुवात भएको छ । एमालेको सहायक संगठन जिफन्टमा आवद्द कतारमा रहेका मजदुर वर्ग लाइ कार्यक्रम लक्षित् गरियो अथवा गरिएन ? संस्थाको मूल उद्देश्य बाट बिचालीत भएर कार्यक्रम गर्नुको उद्द्यश्य के हो ? यदि कार्यक्रम मुल उद्धेश्य संग सरोकार राख्ने भएन भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? मुख्य आयोजक ले यो कुराको जवाफ दिनु पर्छ कि पर्दैन ?
कतारमा कार्यरत विभिन्न समस्या बाट पिडित नेपाली दाजुभाई दिदीबैनी हरुको सहयोगार्थ आयोजना गरिएको भनिएको उक्त कार्यक्रमले आफ्नो प्रक्षेपण अनुसार आर्थिकरुमा लक्ष्य हासिल गर्‍यो होला तर पैसा जम्मा गर्ने नाममा संस्था कति सम्म तल झर्ने र कति सम्म अश्लिल कार्यक्रम देखाउन अनुमति दिने भन्ने बिषयमा जिम्मेवार हुनु पर्छ कि पर्दैन ?
सांस्कृतिक कार्यक्रमको नाम पारियो तर त्याहा भएको प्रस्तुतिमा नेपालको कुन क्षेत्रको संस्कृति झल्कियो ? कुन क्षेत्र र कुन वर्ग को प्रतिनिधत्व हुने कार्यक्रम गरियो ? कुन नैतिक मूल्य बोकेको नाच प्रस्तुत गरियो ? त्यो सबै कुराको जवाफ आयोजक ले दिनु पर्छ कि पर्दैन ?
सांस्कृतिक प्रस्तुतिमा कतारमा श्रम गर्ने श्रमिक हरुको मर्म र व्यथथाका विषयवस्तुहरु समावेस हुन सक्थे या सक्थेनन यो प्रश्न अनुत्तरित रहला तर एक जना आम नेपाली ले अनुभव गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न जिफन्ट का पदाधिकारी हरु लाइ के कुरा ले रोक्यो त्यो प्रश्न महत्वपुर्ण हो ! अब हामी सबैले यो बिषयमा प्रश्न उठाउनु जरुरि छैन र ? जिम्मेवार संस्था हरुले समाज लाइ अनुशासन मा राख्न प्रयत्न गर्ने हो न कि भाँडोभैलो मच्चाउने हो –संस्थाका पदाधिकारी हरु यो बिषयमा जिम्मेवार हुनु पर्दैन र ?
राष्ट्रिय भनिनुभएका कलाकारहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको नाच र हाउभाउ हरु त्यहा उपस्थित सबै दर्शहरुले देख्नुभएको छ ! साधारण दर्शकले मात्र होइन उपस्थित डिप्लोम्याट हरुले पनि देख्नुभयो ! आयोजक हरुले साथमा गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, रमाइलो गर्दै हुनुहुन्थ्यो र कार्यक्रममा सम्पूर्ण रुपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने त्यहा प्रस्तुत नृत्य कुनै सस्तो डान्सबारमा नाचिने जस्तो किन ? त्यस्तो नाच त काठमान्डौ का डान्सबारमा छ्यापछ्याप्ती हेर्न सकिन्छ हैन र ? कतारमा रहेका समाजसेवी हरु र अन्य अग्रज हरुले कलाकार हरु बाट हुन सक्ने सम्भावित प्रस्तुतिको बारेमा र भोलि हुन सक्ने सामाजिक आलोचनाको बारेमा बताई रहदा या सुझाव दीइरहदा त्यो सुखाव लाइ समेत बेवास्ता गरेर संगठनका अध्यक्ष ले नै त्यस किसिमको प्रस्तुति लाइ प्रश्रय दिएको कुरा सहभागी हरुले बताई रहदा संगठन हाक्ने हरु अब सस्कृति प्रति पनि जिम्मेवार हुने बेला भएन र ? अथवा नेपाली परम्परा को बारेमा मात्र नभएर कम्युनिष्ट आन्दोलन र त्यो आन्दोलनमा प्रयोग भएका सांगीतिक परम्पराको बारेमा संगठन हाक्ने हरु जिम्मेवार हुन पर्दैन र भन्ने एउटा टड्कारो प्रश्न तेर्सीएको छ !
जिम्मेवार राजनैतिक दलको सहायक संगठन जिफन्टको कार्यक्रम हाम्रा कलाकार हरुको प्रस्तुती र अभिनयहरु ओजपुर्ण अर्थपुर्ण हुनुपर्थ्यो । जिफन्ट जस्तो गरिमामय ईतिहास भएको संस्थाले कलाकार चयन गर्दा डिस्कोथेकमा बानि परेका र नया परम्परा अनुसार प्रस्तुति दिने कलाकार भन्दा जनगायकहरु बोलाउनुपर्थ्यो कि ? जिफन्टको कार्यक्रममा मजदुरको गीत बज्नु पर्थ्यो कि ? आम नेपालीको प्रतिनिधित्व हुने गीत हरु र त्यहि किसिमका नृत्य हरु प्रस्तुत गरिनु पर्थ्यो कि ? “पाखुरी चलाउनेलाई कसले भन्छ कठै बरिलै” जस्ता प्रगतिशिल, देसभक्त र जनवादी गीत हरु बज्नु पर्ने होइन र जिफन्ट को कार्यक्रम मा? कि कम्युनिजम को नया सिद्दान्तमा क्रान्तिकारी गीत हरुको महत्व र आवस्यकता सकिएको हो र ? जिफन्ट कतारका पदाधिकारी हरुले जवाफ दिन्थे कि ??
जिफन्ट कतारको सांस्कृतिक कार्यक्रम र केहि प्रश्न हरु Reviewed by Durga Pangeni on जनवरी 06, 2018 Rating: 5